Camaloow Online - News: Kooxda Monitoring Group oo shaaca ka qaaday inay ka walaacsan yihiin xaalada deegaanada Maamul Goboleedka Puntland. Home
20 June 2013 08:51:28 Random Media
Majaajile Qosol leh Daawo hadii aad fahmeeysiid 4
Kooxda Monitoring Group oo shaaca ka qaaday inay ka walaacsan yihiin xaalada deegaanada Maamul Goboleedka Puntland. Kooxda Monitoring Group oo shaaca ka qaaday inay ka walaacsan yihiin xaalada deegaanada Maamul Goboleedka Puntland. Markii Al-Shabaab dagaalyahanadooda laga saaray qeybo ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxa ay maciin bideen intooda badan inay u cararaan qeybo ka mid ah dhulka Buuraleyda ee Maamulka Puntland. Kooxda Monitoring Group oo ka mid ah Qaramada Midoobay ayaa shaaca ka qaaday in iminka ay ka walaacsan yihiin xaalada deegaanada Maamul Goboleedka Puntland ee ku aadan in faraha ay la galaan xaaladihii ka jiray deegaanada iyo degmooyinka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, islamarkaana ay halkaasi ka dhacaan dagaalo iyo qaraxyo.
· samatalis sheekh adam on 10/12/2012 ·
0 Comments · 23096 Reads
10,949,791 unique visits